कहिले सार्वजनिक होला एप्पलको ‘आइप्याड–९’? :: Setopati
कहिले सार्वजनिक होला एप्पलको ‘आइप्याड–९’?
एजेन्सी क्यालिफोर्निया, भदौ २७
एप्पलले ‘आइप्याड–८’ सार्वजनिक गरेको लगभग एक वर्ष भइसक्यो। एप्पलको लाइनअपमा सबैभन्दा सस्तो र राम्रो ट्याब्लेटको रुपमा चिनिएको यो आइप्याड धेरैले मनपराएका छन्। यसमा ‘आइप्याड एयर–४’ र ‘१२ इन्चको आइप्याड प्रो’मा जस्तो उच्च फिचर नभएपनि ‘आइप्याड–८’ले बजारमा राम्रै कमाइ गर्यो।
‘आइप्याड–८’को सफलतासँगै बजारमा नयाँ ‘आइप्याड–९’बारे चर्चा हुन सुरु भइसकेको छ। इन्टरनेटमा यो नयाँ आइप्याडमा हुनसक्ने फिचर, सार्वजनिक मिति र मूल्य केकस्ता हुनेछ भनेर अनुमान लगाउन थालिएको छ।
गत हप्ता ब्लुमबर्गका मार्क गुरमानले अमेरिका, बेलायत र अन्य बजारमा ‘आइप्याड–८’ अभाव हुन थालेको उल्लेख गरेका थिए। उनका अनुसार एप्पलका रिटेल कर्मचारीलाई ग्राहकसँग उपकरण आउन ढिलाइ हुनुको कारण नखुलाउन भनिएको छ। एकाएक बजारमा उपकरण अभाव हुनु नयाँ उत्पादन आउने संकेत हो। यसले एप्पल अब ‘आइप्याड–९’को उत्पादन तिर लागेको देखिन्छ।
‘आइप्याड–९’को डिजाइनमा केही नयाँ परिवर्तन नदेखिने डिजिटाइम्सले जनाएको छ। एप्पलले यसको उत्पादनमा अलुमिनियम एलोइ धातु प्रयोग गर्ने भनिएको छ। यो पुराना आइप्याडका डिजाइनभन्दा अलि पातलो आकारको हुने र यसमा द्रुत गतिमा चल्ने प्रोसेसर हुने अनुमान छ। विशेषगरी यो आइप्याड विद्यार्थीहरुलाई लक्षित गरेर बनाइने मार्क गुरमानले बताएका छन्।
उनका अनुसार एप्पलले यही सेप्टेम्बर १४ मा लन्च इभेन्ट आयोजना गरेको छ। त्यहीँ कार्यक्रममा हामीले नयाँ ‘आइप्याड–९’ देख्न सक्ने गुरमानको भनाइ छ।
एप्पलले भने हालसम्म ‘आइप्याड–९’को सार्वजनिक मिति र फिचरबारे केही जानकारी दिएको छैन।
प्रकाशित मिति: आइतबार, भदौ २७, २०७८, १४:३८:२०